Home Somali News Somalia: Madaxweyne Xasan “Waan ka xumahay is-casilaada Caasha Geele Diriye”
Kadib markii ay maalmo ka hor is-casishey guddoomiyihii guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka federaalka Marwo Caasho Geele Diiriye, ayaa war ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya lagu sheegay in Madaxweynaha lagu soo wargeliyey is casilaada islamarkaana uu ka xumaadey.
“Aad baan uga xumaadey is-casilaadda Marwo Caasho Geelle. Waa go’aan ay iyadu gaartey, waana xishmeyneynaa go’aankeeda. Waxaan uga mahadcelineynaa dadaalka badan ee ay gelisey abaabulka guddiga iyo bilaabistii hawlaha muhiimka ee guddiga horyaalla”, sidaas waxaa yiri Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh oo ka hadlaayey is-casilaadii Caasha Geele.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sheegay in Guddiga Madaxbanaan ee Dib u eegista Dastuurka uu muhiim u yahay mustaqbalka waddanka, waxaana u yiri:
“Dib u eegista iyo meel marinta Dastuurka Cusub ee Federaalka waa aasaaska dadaalkeena ku wajahan dhismaha qaranka. Dastuurka waa qeyb muhiim ah oo dhismaha hay’adaha dowliga sal u ah; waxaa loogu talagaley inuu qaabeeyo sida Soomaaliya u ekaan doonto, sida aan qaran ahaan u shaqeyn doonno, qiyamkeena iyo mabaadi’deena intaba. Labada hadaf ee kale ee muhiimka u ah gaarista Hiigsiga 2016 ee dhammeystirka dhismaha dowlad goboleedyada iyo qabsoomidda doorashooyin qaran waxay ku xiran yihiin in laga guul gaaro dib u eegista iyo ansixinta Dastuurka Cusub ee Federaalka”
Xasan Shikh ayaa sheegay in si degdeg loo raadinaayo qofkii buuxin lahaa booska banaanadey:
Caasha Geele ayaa sheegtey in ay sabab u ahayd is-casilaadeeda kadib markii shaada guddigu horey u socon weydey, isla markaana aysan arag madaxbanaani ay k shaqeyn karto.
Somaliland: Madaxweyne Silaanyo Oo Salaadii Jimcaha La Tukaday Shacbiga Reer Berbera